BAAQ KU SOCDA SHACABKA ISAAQA
Cali Warsame Dabagooye
Waxan salaan sharaf leh u soo gudbinayaa shabakada SomaliTalk.com
Waxan ahay muwaadin u dhashay Soamli-land kana soo jeeda gobolka Sanaag. Waxan jecelahay inaan laba eray ka idhaahdo arimaha ka aloosan Sool iyo Sanaag taas oo maanta u qarka u saaran in dhiig badani ku daato sida ay u wadaan nimanka aanu qiimaha la lahayn dhimashada dadka walaalaha ee ku dhaqan degaanadaas.
Waan la socdaa dad aad u fara badan u dhashay beesha ama degaanka aan ka soo jeedaa inaanay jeclaysanayn qoraalkaygan sababtuna waxa weeye umadeenu ma jecla qofka runta u sheega oo waxay jecel yihiin in lagu maaweeliyo khayaali iyo ku tiri ku keentay.
Hadaan taariikhda dib u milisdo ilaa iyo intii lagu dhawaaqay gooni isu taaga Somali-land dhibaatada ugu wayn ee ay ilaa iyo maanta dagaalka qarka ugu saaran tahay waxa weeye inaga oo lugta is jiidayna,laga soo bilaabo dagaalkii sokeeye ee Burco,kii buuraha Shiikh iyo kii ugu dambeeyey ee dhibaatada aadka u wayn u gaystay bulshada reer Soomali-land ee aynu ku waynay dhalinyaro aad u farabadan,maal aad u fara badan,kalana fogeeyey bulshadeena.
Xaaladu meel kastaba ha soo martee inaga ayaa Soomaali-land meesha ay taalo dhignay,haday noqon lahayd nimanka isku sheega siyaasiyiinta ama shacabkaba door lixaad leh ayaynu ka qaadanay baabi'inta dhulkeena masuuliyadeedudana inaga ayay dusha inagaa saaran tahay nin kalena loo eedayn maayo,inaga ayaa dagaal sokeeye isku qaadnay ,dhexgeliney xumaan dadkeenii,qaar ka mid ah ka soo barakicinay dhulkoodii oo qaxooti ka dhigney ilawney dhibaatadii ina soo gaadhay 1988.
Hadaan dulucda hadalka hoos ugu daadago,laga soo bilaabo maalintii beelaha Somali-land ku shireen magaalada burco lana soo afjaray colaadihii beelaha ilaa iyo maanta ma jirto colaad dhexmartay beesha Isaaq iyo Harti,colaadu waxay ku koobnayd Isaaqa oo keliya. Waxan xaqiiq ah inaanay ka dhicin Somali-land colaad aan ahayn ta dhex martay beelaha Isaaq mooyee mid kale.
Waxan ku arkaa warbaahinta Somali-land in xukuumadu doonayso iney sugto xuduudaha Soomali-land,waxase is waydiin leh xagee xukuumadeenu ku maqnayd laga soo bilaabo 1991 ilaa maanta oo ay doonayaan iney colaad cusub dhex dhigaan beelaha Bariga Somali-land. Miyaan ahayn mid lagu qoslo in maanta oo xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ineynu soo baraarugno oo nidhaahno xuduud ayanu sugaynaa.
Walaalayaal ma aha ineynu been isku maameelino,dawaldeenu been ayay inoo sheegtay,tusaale waxan idiinku soo qaadayaa doorashooyinkii ka dhacay dalka ma waxaad u haysataan iney ka dhaceen degaanada Warsangeli iyo dhulbahante,qofkii rumaysan doorasho ayaa ka dhacday Sool iyo Sanaag-bari waxan ku leeyahay waad hurudaaye soo kac,jahawareerinta dawladeena ha dhegaysan.
Waxan shacabka sharafta leh ee Soamli-land kula talin lahaa inaynu xisaabtano eegno galdalooladeena iyo sida xukuumadu shaqadeedii uga soo bixi wayday. Colaada maanta laga soo cusboonaysiinayo Sool iyo Sanaag shacabkeena dan uma aha ee waa mid Daahir Riyaale iyo xulifadiisa ay ayaamo ku danaysanayaan oo ay doonayaan iney shacabka ku mashquuliyaan.
Dadka ku dhaqan Sool iyo Sanaag-bari waa dad walaalaheen ah oo dhaqan iyo is dhal inaga dhaxeeyo inagama mudna ineynu gelino colaad dibna u soo cusboonaysiino dagaaladii qabaa'ilka ee la soo ah jaray 1991,ma aha ineynu ku xadgubuno damiirkooda kuna khasbno waxaanay doonayn sida aynaan u doonayn in inagaba laynagu khasbo wax aynaan raali a ahayn. Waxan u arkaa in xukuumada Soomali-land ay ku fashalintay iney shacabka ku dhaqan Sool iyo Sanaag-bari iney ka mid noqdaan Soamli-land,taasina ma aha mid ka qarsoon qofkii maskaxdiisa adeeganaya.
Dawadu intay hanjabaad iska dayso ama eedaynta ay u soo jeedinayso C/lahi Yuusuf waa iney la timaadaa siyaasad ay dalka ku midaynayso,lacagta loogu tala galay in lagu daadiyo dhiiga reer Sool iyo Sanaag-bari dawaldu qorshe siyaasadeed oo meel mar ah ha ku samayso ,hadaanay taas awoodin dawada yaan laga yeelin qof aan ku doonayn ayaan muquuniyaa, taasi waa tii u socon wayday Siyaad Bare isagoo haystay ciidan iyo hub aad u fara badan inagana inoo socon mayso hadaynu isku dayno.
Gebegebo: Hadii xukuumada Soomali-land ku fashilanta kaalintii siyasadeed ee ay umada u haysay gaar ahaan gobolada sool iyo Sanaag-bari waa in xukuumadu is casishaa umaduna ay doorataa hogaamiye xalin kara dhibaatooyinka umada. Mar labaad waxan idin xusuusinayaa erayadii Boqor Buurmadaw ee qiimaha badnaa kuwaas oo uu ku sheegay shirkii jaraa'id ee uu qabtay magaalada Hargaysa duludeeduna ahayd marnaba ma ogolaalayno in colaad laga abuuro gobolada bariga dalka. Baaqa Boqorku soo saaray wuxuu gaar ahaan ula hadlayaa madax dhaqameedyada,cuqaasha,waxgaradka,mutacaliniinta,iyo inta nabada jecel ee reer Soamli-land gaar ahaan reer Togdheer iyo Sanaag iney ilaaliyaan derisnimada iyo walaaltinimada beriskooda.